မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းရန် အကြိုလှုပ်ရှာ? - Yangon Media Group
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကို ဧပြီလ၁ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အကြိုလူထုလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါမြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီး တိုင်ဖျက်သိမ်းရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုကို မတ်၂၅ရက် မွန်းလွဲ ၃နာရီက ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်သူများတွင်ပါဝင်သူ ဒေါက်တာအောင်စိုးမြင့်က ”ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က တော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းရေးညီလာခံအတွက် အကြိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးကျင်းပ တော့မယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မြစ်ဆုံကို ဘာစံနဲ့မှချိန်မထိုးနဲ့။ ဖျက်သိမ်းရေးတစ်ခုပဲ လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုလုပ်တဲ့သူဟာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံက ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနဲ့မှ အပေးအယူ မလုပ်နိုင်ပါ ဘူး။ ဖျက်သိမ်းရေးတစ်ခုပဲလိုချင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ စသဖြင့်အလွှာစုံမှပုဂ္ဂိုလ်များ ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူ ဦးအောင်မြင့်(ဘိုကလေး )က ”လာမယ့်ဧပြီလ ၁ရက်မှာ ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးမှာ နံနက် (၉)နာရီကနေ (၄)နာရီအထိ ပညာ ရှင်များနဲ့ ဖိတ်ခေါ် ဟောပြောပြီး ညနေပိုင်းမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီး တိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် ဒါကအ ကြိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခု မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေ လာမြောင်းပေးစကားတွေ ပြောလာ တာတွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သား သားမဆောင်ရွက်တာဟာ လူထုကိုမျက်နှာမမူဘူးလို့ ယူဆပါတယ်”ဟုပြောသည်။
မြန်မာ့ အထည်အလိပ်များအား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရေး အတွက် မန္တလေးမြို့တွင် ချည်??